ब्यवसायीले शीर ठाडो पारेर हिँड्नसक्ने वातावरण बनाउँछौं - सुनाखरी न्युज
२०७८ बैशाख ९ , बिहिवार
Posted on: January 1, 2021 - 7:01 am
कार्यकारीणी समितिको सदस्यका उम्मेदवार,
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ,
मुलुकभरका उद्योग वाणिज्य संघहरु मध्ये ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ एउटा पुरानो र सशक्त संघकारुपमा चिनिन्छ । यही पुस १७ र १८ गते यस संघको ४१ औं बार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन हुँदैछ । यसकालागि संघका आवद्ध ब्यवसायीहरु विभिन्न दुई खेमा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसैक्रममा संघका महासचिव एवं अध्यक्षका प्रत्यासी मनोज बहादुर न्याछ्यो समूह आम ब्यवसायीको साझा समूहकोरुपमा अगाडि बढेको छ । यो समूहका तर्फवाट मुकुन्द महर्जनले कार्यकराीणी सदस्यकाािग उम्मेदवारी दिएका छन् । मुकन्द्र स्टोरका प्रवन्ध निर्देशक, होम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं नेपाल मदिरा ब्यवसायी संघका निबर्तमान सह कोषध्यक्ष एवं विन्भिन्न सामाजिक संघ संस्थामा रही समाजसेवाको काम गर्दै आएका समाजसेवी मुकुन्द महर्जनसँग हमीले उहाँको उम्मेदवारी किन र केकालागि भन्ने बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ सुनाखरी न्युज (www.sunakharinews.com) कालागि कार्यकारीणी समितिका प्रत्यासी मुकुन्द महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन नजिकिएको छ । तर ब्यवसायीहरु मिलेर जानुको अलावा दुई खेमामा विभिजन भएको देखिएको छ । किन ?
हेर्नुस कुनै पनि उद्योग वाणिज्य संघकोआवश्यकता भनेको आम यद्यमी ब्यवसायीहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हो । यस्तो अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्ने ब्यीक्तहरुको खोजी ब्यवसायीहरुले गरेको हुन्छ । तर जब आम उद्यमी ब्यवुसायीको आवश्यकता र चाहना भन्दा फरक किसिमका ब्यक्तिहरु अगाडि सरेको देखियो त्यसपछि स्वभाविकरुपमा वास्तविक उद्योगी ब्यवसायीको आवश्यकता महशुस भयो । तसर्थ आम उद्यमी ब्यवसायीको आवश्यकता र चाहना अनुसार मनोज बहालुरको टिम अगाडि बढेको हो । हामीले पनि यही टिमलाई समर्थन गरेर अगाडि बढेका छौं । यो टिमको जित सुनिश्चित छ ।
मनोज वहादुरको टिमको जित सुनिश्चत छ भन्नु भयो । कसरी ?
यो टिकमा वास्तविकरुपमा ब्यवसायीहरुको सहभासिगता छ । आम उद्यमी ब्यवसायीको पिरमर्का वुझेका ब्यीक्तहरु समावेस हुनु भएको छ । बजारमा अहिले धेरै खालका समस्या छन् । ती समस्याको समाधानगर्न यो टिमले मात्रै सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
ब्यवसायीका समस्या के छन् ?
कुनै पनि ब्यवसायमा इमान्दारीता, पारदर्शीता, र दूरदर्शीता अपरिहार्य हुन्छ । यो हुन सकेन भने त्यहाँ समस्या आउँछ । राज्यका तर्फवाट विभिन्न बाहानामा बजार अनुगमन गर्ने, ब्यवसायीलाई तर्साउने, डक धम्की देखाउने जस्ता कार्य भैरहेका हुन्छन् । राज्यको नीति प्रभावकारी छैन । ब्यवसायीहरु पिडामा छन् । यसर्थ यी यावत समस्याको सामाधानकालागि ब्यवसायीहरु नै एजकुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकालागि हाम्रो टिम लागि पर्दै आएको छ । हाम्रो टिमले सफलता हात पारेपश्चात हामी ब्यवसायीमा परेका यी यावत समस्याको समाधन गर्ने पहलमा लाग्नेछौं ।
ब्यवसायीको हक हितकालागि राज्यको नीति छैन र ?
नीति भएर मात्र पुग्दैन । विद्यमान उपभोक्ता ऐन २०७५ अ ब्यवहारिक छ । यो ब्यवसायीको हित अनुकुल छैन । यसलाई समय सासपेक्ष हुनेगरी परिर्मान गर्ने, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने, बजार अनुगमनलाई त्रासकोरुपमा नभई एएटा आवश्यकता हो भनेर त्यसै अनुसार विकास गर्ने लगायतका काम गथर्न आवश्यक छ । अहिले त बजार अनुगमनको नाममा हुलहुज्जत गर्ने र ब्यवसायी धम्क्याउने जस्ता कार्य भैरहेका छन् । यस्ता कार्यको तत्काल अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसकालागि हाम्रो टिमले सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने छ ।
यी यावत समस्या समाधानकालागि यहाँको टिक नै किन ?
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४१ औं बार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन यही १७ र १८ गते हुँदै छ । त्यसमा म कार्यकारिणी सदस्यकालागि उम्मेदवारी दिँदैछु । ‘इमान्दारिता, पारदर्शीता र दूरदर्शिता–उद्योगी ब्यवसायीहरुको हकहित हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने मुख्य नारा हाम्रो छ । त्यसलाई नै समेटेर अगाडि बढ्ने उद्धेश्यले मैले उम्मेदवारी दिएको छु । यसमा हाम्रो सिङगो ब्यवसायीको टिम छ । हामी सामुहिकरुपमा अगाडि बढ्र यस क्षेत्रमा आम उद्यमी ब्यवसायीको हकहितको सुनिश्चितताकालागि प्रतिवद्ध छौं । हाम्रो टिममा रोज्ने भनेको हाम्रो एजेण्डालाई रोज्ने हो । हामी इमान्दारीतापुर्वक पारदर्शी तरिकाले अगाडि बढ्छौं । हामीमा पदादर्शीता र इमान्दारीता छ । हामी नयाँ सोच र योजनमा साथ अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । हामी पुर्खाले गरेको योदानमा अव अरु इटा थप्ने योजनमा छौं ।
यहाँ र यहाँको टिमको एजेण्डा के छन् ?
सम्पूर्ण ललितपुृरवासी उद्योगवाणिज्य संघका साथिहरुलाई मैले १० वुँदे प्रतिवद्धता राखेको छु । ती हुनः
–उपभोक्ता हित ऐन संसोधन
–हस्तकलाको प्रवद्र्धनकालागि छुट्टै टे«ेडमार्कको दर्ता
–लगानीको बातावरण निर्माण
–उद्योगी ब्यवसायीको आवाज सुन्ने वातावरण निर्माण
–कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन
–भन्सार र अन्डर विलिङको समस्या समाधान
–सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिमार्जन
–संघका छुट्टै गुनासो संकलनको ब्यवस्था
–स्कूलमा ब्यवसायमा बारेमा चेतना कार्यक्रम सञ्चालन
–अनुगमनका नाममा हुने आतंक रोकथाम
यहाँको टिममा कस्ता ब्यक्तिहरु हुनुहुन्छ ?
हाम्रो टिम समावेसी छ । यसमा हस्तकला, मदिारा, खाद्यान्न, महिला लगायत समाजका सवै क्षेत्र र वर्गमा मानिसलाई समेटिएको छ ।
तपाइँको टिमको जितपछि ब्यवसायीले के आशा गर्ने ?
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले ५४ औं बशन्त पारगर्दा धेरै आरोह अवरोहहरु आए होलान् । यसक्रममा ब्यवसाइहरुलाई सहज र निर्वाधभरुपमा ब्यवसाय सञ्चालनको बातावरण वनाउने मेरो योजना छ ।
कोरोनावाट सिथिल ब्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
कोभिडका कराण करिव २० प्रतिशत मात्रै ब्यवसाय सञ्चालन भएको अनुभव हामीले गरेका छौं । ब्यवसायीले तीन तहको कर तिर्नु परेको छ । तर ब्यवसायीले राज्यको तर्फवाट कुनै सुविधा पाएको छैन । यसर्थ हामी ब्यवसायीको हक हितकालागि अगाडि बढ्छौ । ठूला ब्यवसायीको साथसाथै हामी मझौला र साना ब्यवसायीलाई पनि टार्गेट गरेर उनीहरुको हकहितकालागि अगाडि बढ्छौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संघ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने कुनै योजना छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालै मात्र नयाँ नेतृत्व आएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघवाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ । ललितपुर जिल्लवाट मात्रै यसपाली तीन जना महासंघका विजयी हुनु भएको छ । यसर्थ हमी अव महासंघसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।
नेतृत्वमा आउने मान्छे ब्यवसायी नै होस र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहना छ । ब्यवसाय नगर्ने र अन्य क्षेत्रमा आवद्ध ब्यक्तिले संघको नेतृत्व नगरोस भन्ने हाम्रो मान्यता हो । वास्तविक ब्यवसायीले मात्र ब्यवसायीका समस्या वुझ्न सक्छन् । यसतर्फ सवैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । यस्तो भयो भने हामी यो संघलाई एउटा नमूना संघकारुपमा अगाडि बढाउन सक्छौ ।